Uyibona njani imbali kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyibona njani imbali kwi-YouTube?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 374
Ukujonga imbali yeevidiyo ezibonwe kwi-YouTube yenye yezona zinto zilula esinokukwenza ngaphakathi kweqonga. Esi sixhobo sisivumela ukuba sifikelele kuzo zonke iifayile esizibonileyo kutshanje kwisicelo kwaye siya kuba nakho ukukhetha ukusicima ukuba sinqwenela.
Ngaba uyafuna ukukhangela ividiyo oyibonileyo ngaphambili kwaye ungazi ukuba ungayenza njani? Imbali inokuba yenye yeendlela ezizezinye ezilungileyo onayo ngaphakathi kweqonga. Yiyo loo nto siya kuba nokukhetha ukufikelela kuyo yonke into esiyibonileyo kwiintsuku zamva nje ngokusebenzisa esi sicelo sidumileyo.
I-YouTube igcina imbali yeevidiyo ezibukeleyo
Njengamanye amaphepha kunye nokusetyenziswa, I-YouTube igcina imbali yazo zonke iividiyo esizibonileyo ngeqonga kwiintsuku zamva nje. Esi sixhobo sinokuba luncedo xa sifuna ukukhangela ifayile esele siyibonile kodwa asikwazi ukulikhumbula igama layo, umzekelo.
Nangona kunjalo imbali yeevidiyo ibonisiwe nayo inokuba likrele elintlangothi-mbini, kuba inokusinikezela kubazali bethu okanye kubahlobo ngohlobo lomxholo esiwudlayo ngeli qonga.
Inyani yile yokuba iYouTube igcina imbali yeevidiyo ezibukeleyo, kwaye iindaba ezimnandi zezokuba inokucinywa nanini na xa sifuna.
Amanyathelo okujonga imbali yeevidiyo ezibonwe kwiYouTube
Awazi ukuba ungayifumana njani imbali yeevidiyo ezibonwe kwi-YouTube? Ukuba kunjalo, siyakumema ukuba ufunde ngononophelo la manyathelo alandelayo anokukunceda ubone yonke imbali yakho ngendlela elula nekhawulezayo.
Ibali alisivumeli kuphela ukufumana iividiyo esizibonileyo ngaphakathi kweqonga, kodwa nazo iyasinceda ukuhlalutya ijelo esilibukele kakhulu Kwaye ukubona nokuba umntu ongaqhelekanga kuthi usebenzise iakhawunti yethu ukujonga uhlobo oluthile lomxholo.
Fikelela kwiakhawunti yakho yeYouTube
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukubona imbali yevidiyo kwi-YouTube iya kuba fikelela kwiakhawunti yethu. Ngenxa yoku singena Www.youtube.com kwaye sibeka i-imeyile ye-imeyile kunye negama lokugqitha.
Cofa kwimigca emithathu ethe tye
Nje ukuba sibe ngaphakathi kwiqonga leYouTube kufuneka Cinezela kwimigca emithathu ethe tyaba ezibonakala phezulu ngasekhohlo kwesikrini ukufikelela kwimenyu yokukhetha.
Cofa kwi "Imbali"
Phakathi kokukhethwa yiplatifomu okubonisayo, kuya kuvela omnye othi "irekhodi”. Kuya kufuneka ucofe apho ukufikelela kuzo zonke iividiyo osandula ukuzibukela kusetyenziswa.
Kwicala lasekunene lesikrini uza kubona iindlela ezininzi ezinxulumene nembali yokuvelisa kwakhona. Olunye lolo khetho kukucima yonke imbali. Ngokucofa apho uya kususa naluphi na umkhondo walo naluphi na uphando olwenzileyo ngaphakathi kweqonga.
Olu khetho lufanelekile kula matyala apho singafuni mntu wesithathu kuye fumanisa uhlobo lomxholo esiwubonayo nge Youtube.
1 I-YouTube igcina imbali yeevidiyo ezibukeleyo
2 Amanyathelo okujonga imbali yeevidiyo ezibonwe kwiYouTube
Uyenza njani iakhawunti yePinterest ngempumelelo?
Indlela yokuvula umntu kwi-Instagram